Honda Vezel 2014 (#623906) ကို Ahlone မြို့နယ်တွင်ရောင်းရ... | CarsDB
2018-06-20 08:14:48 +0630
551 total views, 39 today
မော်ဒယ်မြင့် ဒီဇိုင်းလန်း ဆီစားသက်သာ SUV အမြင့်ကား။
2014 Honda Vezel,
1.5L Hybrid engine, 2wd.
Z grade , RU3,
Original TV , front and rear camera,
eco , normal and sport ဆိုသုံးမျိုးရွှေးချယ်မောင်းနှင်နိုင်၊
cruise control, paddle shift,7speed.
များပြားလှသော function တွေနဲ့မို့အကုန်မပြောတက်။
Brand new နီးပါးရှိသေးတာမို့လာသာကြည့်လိုက်ပါတော့။
၅၈၈ သိန်း, 588 lakhs နီးနီးစပ်စပ်ရောင်းမည်။
Lot Number: #623906
ကျပ် 282 သိန်း
ကျပ် 428 သိန်း